FS2004 imbonakalo - Rikoooo
imbonakalo yeendawo ezahlukeneyo
Nanku lo moya eneenkcukacha ngamazwe isixeko Regina (CYQR) elikomkhulu yePhondo Saskatchewa eKhanada. Le ezinobuhle kuphela FS2004 / FS9. Ubuhle iquka Izakhiwo eziphakamileyo-resolution 3D, photo-lokwenene noburhabaxa, ubusuku kunye noburhabaxa onyaka, izibane, izithuthi wenqila (jonga doc Traffic) ... Funda ngokugqithisileyo
IMicrosoft Flight Simulator ka-2004
ubungakanani 153 MB
Iyakhuphela 11 578
ESardinia Complete Photorealistic Pack FS2004 HOT
Le ifoto-olusengqiqweni kwanobuhle ihlanganisa lonke eSardinia, hayi kuquka iziqithi ezincinane. Nangona yobukhulu enkulu indawo, izinga Isakhelo friendly kakhulu FS2004, nto leyo ethetha ukuba lo mshini akayi ngathi luyehla down.Includes enemingxuma ezaliswe eSardinia, le autogen ukuze imizi li ... Funda ngokugqithisileyo
ubungakanani 524 MB
Iyakhuphela 30 074
Auto-install I-version ye-2
I Aleppo Airport International i-moya indawo e Aleppo, Syria. It has a umthamo abakhweli yezigidi 1.5 ngonyaka ngamnye. Le yesibini iqonga nasekulinganiseni waseSiriya Arab Airlines emva koko evela eDamasko International Airport.Aleppo ine indiza kwisiqingatha sokuqala ce yamashumi amabini ... Funda ngokugqithisileyo
.SAP Christian Dib uSara, Vedat Sencan
ubungakanani 150 MB
Iyakhuphela 23 097